ရွေးကောက်ခြင်း | Election | Real Conversion
ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၁ ) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
Lord’s Day Morning, February 1, 2015
"ထိုစကားကိုတပါးအမျိုးသားတို့သည်ကြားလျှင် ဝမ်းမြောက်၍ ထာဝရဘုရား၏ နှုတ် ကပါတ်ရားတော်ကို ချီးမွမ်းကြ၏။ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါ ခန့်ထားတော်မူသော သူရှိသမျှတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြသဖြင့်၊" (တမန်တော် ၁၃း ၄၈ )
ရှင်ပေါလုနှင့်၎င်း၏အပေါင်းအပါတို့သည် ခရီးသွားကြရာတွင် ရောမအုပ်စိုးသော နယ်ပယ်ရှိအန္တီအုတ်မြို့သို့ရောက်ရှိလာကြသည်။ သူတို့သည် တရားဇရပ်သို့ဝင်ကြသည်။ ထိုတရားဇရပ်အုပ်သည် ရှင်ပေါလုအား တရားဟောရန် ဖိတ်ကြားခ ဲ႔သည်။ ဂျူးခေါင်းဆောင် များသည် အန္တီအုတ်လမ်းသို့လာကြသောအခါ တစ်စုံတစ်ခုကိုပြောရန် ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။ သူတို့က ဘာသာတရား၏အချက်အချာမြို့ဖြစ်သော ယေရုရှလင်မြို့ တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများအကြောင်းကိုကြားလိုကြသည်။ ထိုအရာက ရှင်ပေါလုအား တရားဟောရန်အခွင့်ထူးကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုသည် မတ်တပ်ရပ်ပြီး စတင်တရား ဟောတော့သည်။ သူသည် ဂျူးတို့၏သမိုင်းကို ပြန်လည်ရေတွက်ခဲ့သည်။ သူသည် ခရစ်တော် ပြန်လာမည့်အကြောင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံတော်မူသည်အကြောင်း၊ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသည်အကြောင်း စသည်တို့ကို ဟောကြားခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုက တရားဒေသနာကိုဟောကြားပြီးသည့်အချိန်တွင် ယုဒလူအချို့တို့နှင့် ယုဒအယူဝါဒတွင်ပြောင်း လဲလာသောတပါးအမျိုးသားများစွာတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကြားနာခြင်းတွင် ပို၍ စိတ်ဝင်စားလာကြပါသည်။
နောက်တစ်နေ့ဥပုဒ်နေ့တွင် တစ်မြို့လုံးနီးပါးရှိလူတို့သည် ရှင်ပေါလုဟောကြားသည့် ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောသတင်းစကားကိုနားထောင်ရန်လာခဲ့ကြသည်။
"ခန့်ထားတော်မူသောသူရှိသမျှတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။" ဘုရားသ ခင်သည် ဤသူတို့အား ရှေးမဆွကရွေးနှုတ်ထားတော်မူသည်။ ယခုတွင် ဘုရားသခင်သည် သူတို့အား ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်ထံသို့ဆွဲခေါ်ခဲ့သည်။ လုကာက ဘုရားသခင် သည်မိမိအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်တော်မူကြောင်းကိုပြသောအခါတွင် "ခန့်ထားတော်မူ ၏"….. "ဘိသိတ်ပေးတော်မူသည်" စကားလုံးကိုသုံးရာတွင် အနုစကားလုံးကိုအသုံးပြုထားပါသည်။ ဘုရားသခင်ကသာလျှင် ထာဝရအသက်ကို ခွင့်ပြုတော်မူသည်။ ဤသည်မှာ အပြစ်သားများ အားကယ်တင်ခြင်းအမှုတွင် ဘုရားသခင်၏စိုးစံသောလုပ်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ပြောင်းလဲလာမည့်သူများကို ရွေးချယ်ထားတော်မူသည်။ သူတို့ကို ခေါ်တော်မူ သည်။ သူတို့ကို ဆွဲထုတ်သည်။ သူတို့ကိုပြောင်းလဲစေသည်။ "ခန့်ထားတော်မူသောသူရှိသ မျှတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။" Dr. W. A. Criswell အသုံးပြုထားသော ကျမ်း ပိုဒ်အကြောင်းကို ဤသို့ဆိုထားသည်။
ခန့်ထားတော်မူခြင်းမရှိသောသူရှိသမျှတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသို့မရောက်ကြ။ ရွေး ကောက်ထားသောသူတို့ကသာ ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။ ( "ရွေးချယ်ခြင်း၊ အောင်မြင်ထားသည့် ဘုရားသခင်၏စိုးစံသေရည် )
အလွန်ရိုးစင်းသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ရွေးချယ်ခြင်းအယူဝါဒသည် ကျမ်းစာခံယူချက်ပင်ဖြစ်ပါ သည်။ ထိုအရာအားလုံးသည် သမ္မာကျမ်းစာအားဖြင့်သာဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျက်စီးခြင်း၊ ရွံရှာဖွယ်ရာအပြစ်ကြားတွင်တည်ရှိနေသော လောကကြီး တွင်အသက်ရှိသော နောဧအကြောင်းကိုဖတ်ကြပေမည်။ "နောဧသည် ဘုရားသခင်၏မျက် မှောက်တော်တွင် မျက်နှာရတော်မူသည်။" (ကမ္ဘာဦး ၆း ၈ ) နောဧနှင့်၎င်း၏မိသားစုအားလုံး သည် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှ လွတ်မြောက်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကိုရွေး ချယ်တော်မူပြီး ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူသည်။ ၎င်းမှာ ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကနဦးကမ္ဘာတွင် ရုပ်တုကိုးကွယ်သည့်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည့် ခါလ ဒဲပြည် ဥရမြို့မှခေါ်ထုတ်ခံရသော အာဗြဟံအကြောင်းကိုဖတ်ရှုကြရသည်။ ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား ရုပ်တုကိုးကွယ်သည့်နေရာမှခေါ်ထုတ်ပြီး ကယ်တင်တော်မူကာ လူမျိုးကြီးဖြစ် စေသည်။ ၎င်းမှာ ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အပြစ်နှင့်ပြည့်နေသောသောဒုံမြို့တွင်အသက်ရှင်သည့် လောတအကြောင်းလည်း ဖတ်ကြရပါသည်။ မြို့၏ကံကြမ္မာသည် တိမ်ပါးသွားခဲ့သည်။ လောတသည် မြို့ကို မထားခဲ့လို ပေ။
"သူသည်ဖင်နွဲ့သောအခါ၊ ထာဝရဘုရားသနားတော်မူသောကြောင့်၊ ကောင်းကင်တ မန်တို့သည်၊ သူနှင့်သူ၏မယား၊ သူ၏သမီးနှစ်ယောက်တို့ကို လက်ဆွဲ၍ မြို့ပြင်သို့ ထုတ်ဆောင်ကြသည်။" (ကမ္ဘာဦး ၁၉း ၁၆ )
ထိုအရာမှာ ရွေးချယ်ခြင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။ "လောတ၏မယားမူကား၊ နောက်သို့လှည့်၍ ဆားတိုင်ဖြစ်တော်မူ၏။" ( ကမ္ဘာဦး ၁၉း ၂၆ ) လောတ၏မိန်းမတွင် ထိုသို့သောအရာအဘယ့် ကြောင့်ဖြစ်သနည်း။ သူသည် ရွေးချယ်ခံထားရသူတစ်ယောက်မဟုတ်ပေဘူးလား။ ၎င်းမှာ ဖျက်ဆီးခြင်းခံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အီဂျစ်ပြည်တွင် ကျွန်ခံနေသော ဂျူးလူမျိုးများအကြောင်းကို ဖတ်ရှုကြ ရပါသည်။ သူတို့ကို ကယ်တင်ရန် ဘုရားသခင်က မောရှေကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ တောထဲတွင် မကျွမ်းဘဲလောင်သည့်ချုံတွင် ဘုရားသခင်က မောရှေအားစကားပြောပါသည်။
"သူတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်၊ အဲဂုတ္တုလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်၍၊ ခါနနိလူ၊ ဟိတ္တိ လူ၊ အာမောရိလူ၊ ဖေရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ယေဗုသိလူတို့နေရာ၊ နိူ့နှုင့်ပျားရည် စီးတတ် သောပြည်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းငှါ နာဆင်းလာပြီ။" ( ထွက် ၃း ၈ )
ဤသည်မှာရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတစ်ခုလုံးတွင် သွန်သင်ထားသော အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်ပါသည်။
ဟေရှာယ၏အချိန်ကာလတွင် ဣသရေလအမျိုးသားများသည် ရုပ်တုကိုးကွယ်ပြီး ဆိုး သွင်းကြပေသည်။ ထိုအချိန်ကာလတွင် ပရောဖက်ဟေရှာယက ဤသို့ဆိုပါသည်။
"ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့၌ အနည်းငယ်မျှကျွမ်းစေ တော်မမူလျှင်၊ ငါတို့သည် သောဒုံမြို့ကဲ့သို့ဖြစ်၍ ဂေါမောရနှင့်တူ ကြပြီ။"( ( ဟေရှာယ ၁း ၉ )
ကျန်ကြွင်းသောသူများသာလျှင် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။ ထိုအရာသည် လည်းရွေးချယ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
တဖန် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်လည်း ဘုရားသခင်၏ ရွေးချယ်ခြင်းကျေးဇူးတော်တည်းဟူ သော အချုပ်အခြာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကို ဖတ်ရှုကြရသည်။ ရောမဩဝါဒစာကဆိုထားပါသည်။
"ထိုနည်းတူ၊ ယခုကာလတွင်လည်း ကျေးဇူးတော်အတိုင်း ရွေးကောက် တော်မူ သောကြောင့် အကျန်ရှိသေး၏။ သို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်သို့နည်း။ ဣသရေလလူ တို့သည်ရှာသောအရာကို မတွေ့မရကြ။ ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့သာ တွေ့ရကြ၏။ကြွင်းသောသူတို့ကို မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၏။" (ရောမ ၁၁း ၅၊ ၇ )
"အလိုတော်ရှိသောစေတနာအတိုင်း ရှေးမဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏။ ဘုရားသ ခင်သည် နှလုံးသွင်းတော်မူသောစေတနာတော်နှင့်လျော်သောအလိုတော်၏နက်နဲ သောအရာကို ငါတို့အားပြတော်မူ၏။ ထိုနက်နဲသောအရာဟူမူကား၊ ကာလအချိန် စေ့စုံခြင်း၏သာသနာတွင် ကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်ရှိရှိသမျှတို့ကို ပေါင်း၍ ခရစ် တော်၌ ချုပ်ခြာစေတော်မူလိမ့်သတည်း။ မိမိစေတနာ၏အလိုတော်သို့လိုက်၍ အလုံးစုံတို့ကို စီရင်ပြုပြင်တတ်သောသူ၏ ကြံစည်ခြင်းရှိသည်အတိုင်း၊ ရှေးမဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူသည်နှင့်အညီ၊ ငါတို့သည် ထိုခရစ်တော်အားဖြင့် အမွေခံဖြစ် ကြ၏။" ( ဧဖက် ၁း ၅၊ ၉-၁၁ )
"သို့သော်လည်း၊ သခင်ဘုရားချစ်တော်မူသောညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့သည် စိတ်သန့် ရှင်းခြင်း၊ သမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်စိမ့် သောငှါ၊ ဘုရားသခင်သည်ရှေးဦးစွာကပင် သင်တို့ကို ရွေးကောက်တော်မူသည်ဖြစ် ၍၊ ငါတို့သည် သင်တို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို အစဉ်မပြတ်ချီးမွမ်း ကြမည်။ ထိုသို့အလို့ငှါ ငါတို့ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် သင်တို့ကို ခေါ်တော်မူပြီ။ အ ကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုန်းကို ပိုင်ရမည့်အကြောင်း တည်း။" (၂ သက် ၂း ၁၃-၁၄ )
ဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသည်။ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသည်၊ ဘုရားသခင်က သူ ၏လူတို့ကို ရွေးကောက်တော်မူသည်။ မည်သည့်နိူင်ငံရေးသမားကပြောပါစေ၊ မည်သို့သောနိူင် ငံတော်တရားရုံးကပြောပါစေ သို့မဟုတ် မည်သို့သော မွတ်စလင်ကိုင်းရှိုင်းသူများကပြောပါစေ၊ ကိစ္စမရှိပါ။ ဘုရားသခင်သည် ကတိတော်ပြည်ကို အာဗြဟံနှင့် ၎င်း၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက်များအ တွက် ထာဝရအမွေပေးထားခဲ့ပါသည်။ ထိုမြေကို သူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။ ဣသရေလလူ မျိုးများကိုနှမြောတော်မူပြီး ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောပြည်သို့ပြန်လာရန်မှာ ဘုရားသခင် ၏ရွေးချယ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ထိုသူတို့ကို အဘယ်လူမျိုးတိုင်း နိူင်ငံကမှ ဖျက်ဆီးတော်မူမည်မဟုတ်။ ထိုအရာမှာ ရွေးချယ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
အချို့သောသူများက ရွေးချယ်ခြင်းတွင် သင်ယုံကြည်တော်မူလျှင် ဝိညာဉ်တော်ရိတ် သိမ်းမည်မဟုတ်ဟုဆိုကြသည်။ ကယ်လ်ဗင်းအယူဝါဒရှိသူများက ဝိညာဉ်တော်ရိတ်သိမ်းခြင်း မရှိကြောင်းကို တွေ့ရှိနိူင်ပါသည်။ သို့သော် Dr. Martyn Lloyd-Jones က သူတို့သည် စစ်မှန် သောကယ်လ်ဗင်းများမဟုတ်ကြပါ၊ သူတို့သည် "အတွေးအခေါ်" တစ်ခုကဲ့သို့ သူတို့၏ယုံ ကြည်ခြင်းသာရှိသည် ဟုဆိုပါသည်။ ရွေးကောက်ခြင်းကို ယုံကြည်သောသူတို့သည် လက်ဝါး ကပ်တိုင်တော်ခေတ်တွင် ဝိညာဉ်ကောက်ရိတ်သိမ်းသူများဖြစ်ကြပါသည်။ ဧဝံဂေလိဆရာကြီး Whitefield, William Carey, ရှေးဦးသာသနာပြုများ၊ Adoniram Judson, ပထမဆုံးအမေရိ ကန်သာသနာပြုများဖြစ်ကြသော Dr. David Livingstone, အာဖရိကတမန်တော်၊ အချိန်တိုင်း အကောင်းဆုံးနှစ်ခြင်းတရားဟောဆရာကြီး C. H. Spurgeon တို့က ရွေးချယ် ထားခြင်းအကြောင်းကို ယုံကြည်ကြပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ဤအသင်းတော်ကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၄၀ ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါ သည်။ ရွေးချယ်ခြင်းကို အမြဲတမ်းအယုံအကြည်မရှိခဲ့ပါ။ ထိုအရာမှာ ကျွန်ုပ်နှင့်သာသက်ဆိုင် သည်ဟု ထင်မိသည်။ ထိုဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးကို သယ်ဆောင်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်အတွက် ခက်ခဲလွန်း လှပါသည်။ သို့သော် ဤကြီးမားသည့် သမ္မာတရားကိုစတင်မြင်တွေ့သကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏ရွေးနှုတ်ကယ်တင်သောကျေးဇူးတော်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ သင့်အသက်တာ တွင် ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့ ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းသည် ကျွန်ုပ်အသက်တာတွင် ချိုမြိန်လာ ပါသည်။ သင်မကျဆုံးနိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကြီးမားပြီး ဆိုးသွင်းသည့် မြို့ဈေးတန်း နှင့်လမ်းထဲသို့ထွက်သွားသည်။ ထို့အပြင် လူ့ဥာဏ်ပညာက "သင်မလုပ်ဆောင်နိူင်ပါ။ ပြီးပြည့် စုံနိူင်မည်လည်းမဟုတ်ပါ။ အသင်းတော်သို့ခေါ်လာသည့်လူတိုင်းသည် လဲကျပေလိမ့်မည်" ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုစကားမှာ မာရ်နတ်၏စကားသာဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော် မှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။
"ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါ ခန့်ထားတော်မူသော သူရှိသမျှတို့သည် ယုံကြည်ခြင်း သို့ရောက်ကြ၏။" ( တမန်တော် ၁၃း ၄၈ )
ကျွန်ုပ်တို့မကျဆုံးနိူင်ပါ။ ရွေးကောက်ခံရသူများသည် လာ၍နေကြလိမ့်မည်။ ရွေးကောက်ခံရ သူများသည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ သွား၍ သူတို့ကို ဆောင်ယူပါ။ လုပ် ဆောင်ပါ။ လုပ်ဆောင်ပါ။ လုပ်ဆောင်ပါ။ ခရစ်တော်သည် ထိုသူတို့အားဖြင့် ဘုန်းထင်ရှားပေ လိမ့်မည်။ ရွေးချယ်ခံထားရသူများသည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်လိ်မ့်မည်။ "သူတို့ကို ဆောင်ယူပါ။" သီဆိုကျူးဧပါ။
("(ဆောင်ယူလာပါ" Alexcenah Thomas ၁၉ ရာစု ရေးစပ်သည်။)
နတ်ဆိုးက "နိူးထမှုလုံစးဝမရှိနိူင်ပါ၊ သင်သည် အရင်ကကြိုးစားခဲ့ပေမည်၊ လုံးဝမဖြစ်ခဲ့ပါ" ဟုဆိုမည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားတော်မူသောကြောင့် ဖြစ်နိူင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်တွင် ဖြစ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မလုပ်ဆောင် နိူင်သောအရာကို ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်နိူင်ပါသည်။ သခင်ဘုရား နိူးထမှုကို စေလွှတ်တော် မူပါ။ သီချင်းဆိုပါ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အသုံးချနိူင်သည့် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာသတိ ပေးထားချက်ရှိပါသည်။ ထိုအရာမှာ….
“"ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့သာတွေ့ရကြ၏၊ ကြွင်းသောသူတို့ကို မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၏။"((ရောမ ၁၁း ၇ )
"ဤ"အရာက ကယ်တင်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ ကျမ်းပိုဒ်က ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်ကို လည်းအသုံးချနိူင်ပါသည်။ ရွေးကောက်ခံရသူများက အဘယ့်ကြောင့် ရယူကြပါသနည်း။ ကောင်းပြီ။ ဘုရားသ ခင်က ကြားစရာနားကိုပေးထားသည်၊ မြင်စရာမျက်စိပေးထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ သည် တရားဒေသနာကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ သူတို့အပြစ်ကိုလည်းမြင်ကြ သည်။ သူတို့သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားကြပါသည်။ ရိုးစင်းသောအရာပင်ဖြစ်ပါ သည်။ "ကြွင်းသောသူတို့ကို မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၏။" ထိုသူမှာ သင်မဟုတ်ဟု ကျွန်ုပ်မျှော်လင့် ပါသည်။ သို့သော် ဖြစ်နိူင်မည်ကိုတော့ ကြောက်မိသည်။ "ရွေးကောက် တော်မူသော သူတို့ သာတွေ့ရကြ၏၊ ကြွင်းသောသူတို့ကို မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၏။"
"ကြွင်းသောသူတို့သည်" ထိုအရာကို ကြားခဲ့ကြသော်လည်း ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးတံခါး ကိုပိတ်ထားကြပါသည်။ သူတို့က သင်းအုပ် Wurmbrand၏ ဇာတ်ကားကို ကြည့်ရှုကြပြီးဖြစ် သည်။ ခရစ်တော်အတွက် နှိပ်စက်ခြင်းခံကြရသည်။ သူတို့သည် ထိုအရာကို အရင်ကတွေ့ခဲ့ ကြပါသည်။ သူတို့သည် တွေ့ခဲ့ကြပြီဖြစ်၍၊ သူတို့၏စိတ်နှလုံးသည် ၎င်းတို့နှင့်နီးကပ်စွာရှိနေပါ သည်။ သူတို့သည် သင်းအုပ် Wurmbrand ၏တရားဒေသနာကို မကြားကြ၊ မစဉ်းစားကြပေ။ သူတို့သည် Dr. Chan ဟောပြောသည်ကို အကြိမ်များစွာ ကြားခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် သူ့စိတ်နှ လုံးလွယ်ကူခြင်း၊ သူ့၏ဖောက်ထွန်းမြင်နိူင်သည့် ရိုးသားခြင်းနှင့် အလေးအနက်ထားခြင်းက သူတို့ကို မတွေ့ထိနိူင်ပါ။ သူတို့သည် သူ၏တရားဟောချက်နှင့်ဆုတောင်းချက်များကိုကြားခဲ့ ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့၏စိတ်နှလုံးသည် သူပြောသောစကားများနှင့်နီးစပ်လျက်ရှိပါသည်။ သူတို့သည် ကျွန်ုပ်တရားဟောသည်ကိုလည်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်၏တုန်ရီသောအသံသည် သူတို့ရှိနေကြသည့်နံရံကို ဖောက်ထွက်နိူင်ပါ သည်။ သူတို့သည် ကျွန်ုပ်၏စွပ်စွဲချက်နှင့်တောင်းလျှောက်မှုများကို ကြားရသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်၏တရားဒေသနာသည် သူတို့ကို တို့ထိသည်။ သူတို့စိတ်နှလုံးသည် ကျွန်ုပ်ဟောကြား သောအကို ပိတ်ထားကြသည်။
သို့ရာတွင် ရွေးကောက်ထားသောသူများသည် ထိုသို့မဟုတ်။ သူတို့သည် ထိုဗွီဒီယို တွင် သင်းအုပ် Wurmbrand တို့ကြားသည့်အချိန်တွင် သူတို့ကို ကြောက်ရွှံ့ရိုသေခြင်းနှင့် အံ့ဩဖွယ်ရာဖြင့် ရိုက်နှက်ကြသည်။ သူတို့သည် သူ့အား ရောမအင်ပါယာထောင်ထဲတွင် ကြိုး နှင့်မှောင်မိုက်မှလွှတ်မြောက်လာသည့် ရှင်ပေါလုကဲ့သို့ နားထောင်ကြသည်။ သူတို့သည် Dr. Chan ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ကြုံသည့် ဆေးဆရာလုကာကဲ့သို့မှတ်ကာ နားထောင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည် မာတင်လုကာကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်၏တုန်လှုပ်သောတရားဟောချက်ကို နားထောင်ကြ သည်။ ခရစ်တော်၏ထွက်သောသွေးစက်တွင် နှိမ့်သိမ့်ခြင်းကို တွေ့ရှိကြသည်။
"ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့သာတွေ့ရကြ၏၊ ကြွင်းသောသူတို့ကို	မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၏။" (ရောမ ၁၁း ၇ )
သင်းအုပ်ဆရာ Wurmbrand ကို တစ်ဦးတည်ချုပ်နှောင်မခံရမီ သူသည် ကွန်မြူနစ်များရှိ သည့်နေရာတွင် အခြားထောင်သားများကို တရားဟောနိူင်သည်။ Stancu အမည်ရှိလူတစ်ဦး သည် သူ့အား ဤသို့ဆိုထားသည်။
George Bernard Shaw သည် တစ်ချိန်က လူတို့သည် ငယ်ရွယ်သည့်အ ချိန်တွင် စစ်မှန်သောအရာကို ဆုတ်ကိုင်ရန်ခက်ခဲသည်ဟူသောခရစ်ယာန် ဘာသာ၏သေး ငယ်သော တစ်ခါသောက်ဆေးလေးဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးကြကြောင်းကို အကြံ ပေးထားကြပါသည်။ (Richard Wurmbrand, In God's Underground, Living Sacrifice Book Co., ၂၀၀၄ ထုတ်ဝေခြင်း၊ စာ- ၁၂၀ )
ထိုသို့ သင့်အသက်တာတွင် ဖြစ်ခဲ့ပါသလား။ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖူးပါသလား။ စစ်မှန် သည့်အရာ သင်လက်မခံနိူင်သောခရစ်ယာန်ဘာသာ၏သေးငယ်သောဆေးလေးကိုလက်ခံဖူး ပါသလား။
စစ်မှန်သောစကားကိုပြောဖို့ရန် သင်သည် မျက်စိအသစ်ဖြင့်သာ အရာအားလုံးကို တွေ့မြင်နိူင်သည်။ အသစ်သောနားဖြင့် အားလုံးကို ကြားနိူင်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် သင်ဖတ်ရှုရသော သမ္မာတရားသည် သင့်အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိူင်ပါ။ သင့်စိတ်ဝိညာဉ်၏တန် ဖိုး၊ သင့်စိတ်နှလုံး၏အပြစ်၊ ခရစ်တော်မပါသည့် ထာဝရဆင်းရဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း စသဖြင့် ဤအ ရာများသည် အသစ်သောနည်းလမ်းတစ်ခုတွင် သင်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကို ဆုတ်ကိုင်ထားရမည်၊ သို့မဟုတ် ကယ်တင်ခြင်းမရှိနိူင်တော့ပါ။
Dr. Cagan နှင့် ကျွန်ုပ်သည် ကယ်တင်ခြင်းဘယ်တော့မှမရ၊ ၎င်းတို့၏အပြစ်နှင့်ဆိုး သွင်းသောစိတ်နှလုံးဖြင့် ရောစပ်နေသည်ဟု ထင်ရသောသူများ လည်းတွေ့ခဲ့ကြသည်။ သူတို့အပြစ်အတွက် ငိုကြွေးမြည်တမ်းသူများကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ ခရစ်တော်ကိုးစားသော သူများကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။ ဤလောက၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြတ်သန်းကာ ဝိညာဉ်ရေးရာနယ် ပယ်တွင် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်ကိုကြုံတွေ့သောသူများလည်းတွေ့ရှိကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤရုတ်တရက်ယုံကြည်ခြင်းကို ရှင်းမပြနိူင်ပါ။ ဤဘုရားလူက ကြုံတွေ့ခဲ့ကြ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသော သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်သော ထူးခြားသောတစ်စုံတစ်ရာအား ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ သူတို့သည် အရင်ကကြားခဲ့သည့် စကားလုံးများကိုပြောခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သူတို့စိတ်နှလုံးကို ရုတ်တရက်စကားပြောပါသည်။ သူတို့က ၎င်းတို့၏အပြစ်နှင့်ပြည့်၀နေသောသဘောသဘာ၀၏မရော်ကန်မှုများကို ခံစားရသည်။ သူတို့ သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ပြေးလွှားသည်။ သူတို့ကို အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်များမှ ဆေး ကြောထားသည်။ သူတို့ကို ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါြးစေတော်မူသည်။ သူတို့ကို ယခုတွင် ခရစ်တော် ၌ တည်နေကြသည်။ ဤသည်မှာ စကားပြောခြင်း၏နိမိတ်ပင်ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်း၏အံ့ ဩဖွယ်ရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုခရစ်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံရန် ဤလောကသို့ ကြွလာရသည့် အကြောင်းတရားပင်ဖြစ်ပါသည်။ အသွေးတော် သွန်းလောင်းရသည့် အ ကြောင်းတရားလည်းဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ သင်၏အပြစ်များကို ထာဝရဆေးကြောတော်မူရ ပေသည်။ ဤသည်မှာ သေခြင်းမှ ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ထာဝရအသက်ကို ပေးရသည့်အကြောင်းတရားပင်ဖြစ်ပါသည်။
"ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့သာတွေ့ရကြ၏၊ ကြွင်းသောသူတို့ကို	မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၏။" ( ရောမ ၁၁း ၇ )
"အို၊ သင်းအုပ်ဆရာ" "ကျွန်ုပ်မျက်စိမကန်းလိုပါ၊ ရွေးချယ်ခံရသောသူတစ်ယောက်ဖြစ် လိုသည်" ဟု တစ်စုံတစ်ဦးက ပြောပေမည်။ ထို့နောက် "သင်၏အခေါ်ခံရခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခံ ရခြင်းကို သေချာစေပါ။" ( ၂ပေ ၁း ၁၀ ) သခင်၏မကောင်းသောစိတ်နှလုံးကို ထိုးဖောက်ဝင် ရောက်လာသည့် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်ကို မငြင်းပါနှင့်။ ခရစ်တော်ထံပါးသို့ ဆွဲခေါ်သည့် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကို မတွန်းလှန်ပါနှင့်။ အသွေးတော်၏ခြေရင်းသို့ဆောင်ယူလာပါ။
ကျွန်ုပ်၏မိခင်သည် ၎င်း၏အသက်တာတစ်ခုလုံးတွင် အသင်းတော်၏အတွင်းအပြင် သို့အချိန်များစွာနေရပါလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် ၎င်း၏စိတ်နှလုံးသည် ဧဝံဂေလိတရားနှင့်ပါတ် သက်လာလျှင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပါ။ သူမက ၎င်းကို ဆုတ်ကိုင်မထားနိူင်ပါ။ သူမ၏စိတ်နှ လုံးတွင် သူစိမ်းဆန်နေပေသည်။ သူမသည် ပျောက်ဆုံးနေသည်။ ထို့နောက် သူမသည် ကျွန်ုပ်တို့အိမ်နောက်ဖေးတွင် သီချင်းဆိုနေကြသည်ကို ကြားခဲ့သည်။ သူတို့သည် အသက်ခုနှစ် နှစ်ခန့်ရှိပါသည်။ သူမက သူတို့သီဆိုနေကြသည်ကို ကြားကြရသည်မှာ….
("ဆေးကြောခြင်းခံပြီလား"၊ Elisha A. Hoffman, ၁၈၃၉-၁၉၂၉ )
သူမသည် ထိုနေ့ရက်တွင် ကျွန်ုပ်ကို ထိုအရာနှင့်ပါတ်သက်ပြီး မှတ်ချက်ပေးသည်။ သူမသည် " ထိုသီချင်းမှာ ကလေးအတွက် 'ဆေးကြောခြင်းခံပြီလား'သီချင်းဆိုရန် ခပ်စိမ်းစိမ်းဖြစ်နေ သည်၊ အဘယ်မျှလောက်စိမ်းသောသီချင်းဖြစ်ပါသနည်း။"
သို့ရာတွင် အချိန်တိုအချိန်တွင် သူမအတွက် စိမ်းစိမ်းဖြစ်နေပါသည်။ သူသည် ခရစ် တော်ထံပါးသို့ရောက်ရှိလာပြီး ပြောင်းလဲလာသည်။ သူက ကျွန်ုပ်အား "ရောဘတ်၊ ခရစ်တော် သည် စစ်မှန်သောသူဖြစ်သည်၊ သူသည် ကျွန်ုပ်ထံသို့ရောက်လာသောအချိန်တွင် သူသည် သန့်ရှင်းစေပြီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဖြစ်သည်" ဟုဆိုသည်။ အရင်က ထိုသို့ပြောသောသူ တစ်စုံတစ်ဦးမျှမကြားဘူးပါ။ အဘယ်နေရာတွင် မျှထိုသို့မဖတ်ဘူးပါ။ သူမမှတပါး ထိုသို့တိကျ သောအတွေ့အကြုံရှိသူမရှိပါ။ သို့ရာတွင် ထိုအရာသည် ခရစ်တော်ထံပါးသို့ ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ရောက်လာသည့်အချိန်တွင် မိခင်၏အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါသည်။ သူမကို "သိုးသငယ် ၏အသွေးတော်အားဖြင့်ဆေးကြောခြင်းခံစေသည်။"
သင်အသက်တာတွင်လည်း ထိုနည်းတူဖြစ်လာရမည်ဟု မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ သို့သော် ရိုးစင်းသောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်ထံပါးသို့ရောက်ရှိလာသောအချိန်တွင် သင်သည် လည်း ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ လောက၏ အပြစ်ကိုဆောင်ယူခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ သူ၌ သူမတွင်ရှိသည့်တိကျသောအတွေ့အကြုံမရှိ သော်လည်း ယေရှုက "ငါ့ကိုရှာသောအခါ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နှင့်ရှာလျှင် တွေ့ကြလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း၊ သင်တို့အတွေ့ကိုခံမည်" ဟု ဂတိပေးထားတော်မူသည်။ ( ယေရမိ ၂၉း ၁၃ ) သင်သည် ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားသောအခါ သင့်ကိုလည်း ရွေးကောက်ခံရသောသူတစ်ဦး ကဲ့သို့ ဖော်ပြပါသည်။ Dr. Chan ယေရှုကို ယနေ့တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်က ခရစ်တော်ကို ကိုးစားလာရန် ဆုတောင်းပေးပါ။
သငျသည Dr. Hymers ၏တရားဒသေနာကို အငျတာနကျပေါ်ရှိ
ကိုနှိပျပွီး www.realconversion.com သို့မဟုတ www.rlhsermons.com တှငျ
Dr. Hymers ကkd rlhymersjr@sbcglobal.net ဖွငျ့လညျး အီးမေးလျပေးပို့ နိူငျပါသညျ။
သို့မဟုတf P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015 ဖွငျ့လညျး
စာရေးသားပေးပို့နိူငျပါသညျ။ သို့မဟုတf (818)352-0452 ဖွငျ့ဖုနျးဆကျနိူငျသညျ။
ဤတရားဒသေနာစာမူများကို မူပိုငျခှငျ့မထားပါ။ Dr. Hymers ၏ခှငျ့ပွုခကျြ
မရဘဲအသုံးပွုနိုငျသညျ။ သို့ရာတှငf Dr. Hymers ၏ဗှီဒီယိုတရားခှအေားလုံးမှာမူ
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme ကဆောင်ရွက်သည်။ တမန် ၁၃း ၄၄-၄၈
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။ “မိတ်ဆွေတစ်ယောက်တွေ့ခဲ့ပြီ”၊
James G. Small, ၁၈၁၇-၁၈၈၈ ရေးစပ်သည်။ )